चीनले दिएको कोरोनाबिरुद्ध खोप २५ गतेदेखि लगाउने निर्णय — Sanchar Kendra
चीनले दिएको कोरोनाबिरुद्ध खोप २५ गतेदेखि लगाउने निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले चीनबाट अनुदान सहयोगमा प्राप्त गरेको कोरोनाविरुद्धको भेरोसेल खोप आगामी २५ चैतदेखि लगाउने निर्णय गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले खोप काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पताल र प्रदेशस्तरीय अस्पतालमा मात्रै लगाउने योजना बनाएको प्रवक्ता प्राडा जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए । मन्त्रालयले यसअघिनै ४० देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई खोप दिने निर्णय गरेको थियो ।
चिनियाँ खोप कम्पनी सिनोफार्म बेइजिङ इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको खोपको ८ लाख डोज गत १६ चैतमा नेपाल आएको थियो । चीन भ्रमणमा जानेहरु, अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थी, व्यापार व्यवसाय गर्न जानेलाई प्राथमिकतामा राखिने उनले बताए ।
यस्तै छिमेकी राष्ट्र भारतमा कोरोनाभाइरस (कोभिड—१९) संक्रमित बढेसँगै नेपालमा केही दिनयता संक्रमण बढ्दै गएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ९९ जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमले बताए ।
प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमितको दर पनि बढेको छ । यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर १ सय ७६ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । काठमाडौंमा ८७, भक्तपुरमा ४ र ललितपुरमा ८ जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको छ । सोही अवधिमा ११७ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् ।